Save Arakan Kingdom!
အကျွှန်ရို.ဇာနိန်ရာ ရောက်ရောက် အကျွှန်ရို.၏အိမ်သည် အဖရခိုင်ပြည် သာဖြိူက်တေ။ ဖက်ခွက်စားနယ်ချဲ.တိလက်အောက်ကရုန်းထွက်ဂတ်ပါ။ ရခိုင်နိုင်ငံတော်ကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို.ကြိုးစာဂတ်ပါ။
posted by မျိုးသာဂီ at Saturday, September 05, 20090Comments Links to this post
တောင်ခိုးကိုနှိက်သက်ရေ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နန့်အကျွန်ရေ ဘူးတစ်လုံးစီယူ၊ ဘုန်းကြီးသင်တိုင်းရှည်ကြီးတိဝတ် တစ်ယောက်ကိုဖေသျှာ တစ်ရာစီယူပြီး ကေခရိတ်ထွက်ကတ်ပါရေ။ဒေထက်ဖေသျှာအပိုမလိုပါ။ ဖေသျှာတစ်ရာယင် အရေးပေါ်အတွက်သာ။ မြို့တိ မှာတောင်း၊ ရွာသျှေဇနပုဒ်တိမှာတောင်း၊ တံခါးဝတိ၊ အိမ်ဖြူကကြီး၊ တာအိုဘုရားကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးသင်္ခမ်း၊ တောင်းရမ်းခကတ်တေ။ ပဇာကိုပင်တောင်းရဖို့ဆိုစွာကိုလည်း သတိပြုခကတ်ပါရေ။ ထမင်းကိုရာတောင်းပါရေ။ အရက်ကိုမတောင်းပါ။ ဟင်းရွက်ကန်စွန်းကိုရာတောင်းပါရေ။ သားငါးကို မတောင်းပါ။ တောင်းရေအသံယင်နနှိမ့်ချချပါ။ ကကြွီကကွဲမဟုတ်ပါ။ ပီးရေအခါ အကျွန်ရေ သူရို့အနားကထွက် လားပါရေ။ မပီးရေအခါမှာလည်းသူအရို့အနားက ခွာလားပါရေ။ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က အစာမငတ်ဖို့ပါ။ တချို့လူတိက ရိုင်းပျပါရေ။ ဦးညွှတ်ပြီး ရိုင်းပျမှုကို ခံယူလိုက်ပါရေ။ တောင်းစရာနေရာမဟိကေယင် တောင်းလို့မဖြစ်ပါ။ အကျွန်ရို့ယူခရေဖေသျှာထဲက တစ်ကျပ်တစ်ပြား သုံးရပါရေ။ မသုံးမဖြစ်မှသုံးစွာပါရာ။ခရိတ်ပန်းတိုင်မဟိပဲ ခရိတ်လားစွာပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွိရေနိရာမှာ တချက်သျှေရပ်ပါရေ။ အသာအသာရာလားပါရေ။ တနိ့မှာမှ လီပေါင်း တစ်ဆယ်၊ နှစ်ဆယ်၊ သုံးဆယ်၊ လေးဆယ်၊ ငါးဆယ်။ ဂဂေါင်းကြိုးစားပန်းစားမလုပ်ပါ။ ညောင်းအောင်ထိတော့လားပါရေ။ တောင်တန်းနန့် စမ်းရီကိုတွိကေယင်၊ စမ်းနန့်ကျောက်တုံးဖဖြူ၊ ရီကြက်နန့် ငှက်သာရကာက ဖမ်းစားရေအခါ၊ ရီထဲက ကျွန်းအငယ့်သျှေ တနိရာကိုရွီးပြီးကေ ကျောက်တုံးတစ်ခုထက်မှာထိုင်ပါရေ။ အဝီးကိုငေးပါရေ။ သစ်ခွတ်သမားတိ၊ တံငါတိ၊ ကျွှန်းသားတိ၊ ဇရာဒုဗ္ဗလ သက်ကြီးရွယ်အိုတိကိုတွိ့ရေခါ ဇာသူဇာဝါပါလို့ နှုတ်ဆက်မနိခပါ။ တောတောင် ရာသီသာယာလှပစွာကိုရာ ပြောပါရေ။ တချက်တပြနန့် ဝမ်းပန်းမနည်း ခွဲခပါရေ။
ဥတုဆိုးကေ ခိုစရာယှာပါရေ။ ကုန်းကြောင်းလားရေခါ ဘေးကိုရပ်ပြီး တခြားလူတိကို ဖယ်ပီးပါရေ။ လှီစီးရေခါ တခြားလူတိကို ကိုယ့်အရင် လှီထက်တက်စီပါရေ။ မိုးသက်မုန်တိုင်းလာရေခါချောင်းမြောင်းကိုဖြတ်ဖို့မကြိုးစားပါ။ ချောင်းမြောင်းဖြတ်ရေခါ မိုးသက်မုန်တိုင်းကျရေခါမှာယင် စိတ်နှလုံးကိုငြိ်မ်အောင်ထားပါရေ။ ဘဝကို နားလည်မှုဟိစွာ ကံကြမ္မာကို အပ်လိုက်ပါရေ။ အကျွန်ကို အကျွန်ရို့ပြောကတ်ပါရေ။ မြစ်ကိုကူးယင်းရီနစ်စွာလေ့ကံကြမ္မာအလိုပါရာ။ စိုးနှောင့်ဗျာပါပွေကေယင် လွတ်ဖို့လို့လား။ ငရို့မလွတ်ကေ ယင်းရေငရို့ခရိတ်အဆုံးပါ။ ကံကောင်းထောက်မ လွတ်ရေအခါ အယင်ပိုင် ခရိတ်ဆက်ရုံပါ။ ရိုင်းစိုင်းရေ့ လူငယ်တစ်ယောက်နန့် မတော်တဆ တိုက်မိရေအခါ ထိုသူငယ်ကရိုင်းစိုင်းကေလေ့ သူ့ကိုယယိုင်ကကျေးတောင်းပန်လိုက်ပါရေ။ တောင်းပန်ကေလေ့မရ၊ တိုက်ကြခိုက်ကြရဖို့ဆိုကေတော့ယင်းရေ ငရို့ခရိတ်အဆုံးပါ။ မတိုက်ရပဲလွတ်လာကေတော့ခရိတ်ဆက်ရုံပါရာ။ တစ်ယောက်ယောက် နာမကျန်းဖြစ်ရေအခါ မကျန်းမာသူကိုပြုစုဖို့ နားရပါရေ။ ဆီးသျှေဝါးသျှေ တောင်းရပါရေ။ နာဖျားသူကယင် တတည်ငငြိမ်ခံယူပါရေ။ သူကယင်သူ့ အတွင်းကို ပြန်ကြည့်ပြီး သီခြင်းကို မကြောက်ပါ။ ယျေဇုနန့် ကြီးကျယ်ရေ ဖျားနာခြင်းလေ့ အငယ့်သျှေဖြစ်လခပြီးကေ အာဂန္တု အဖျားဆိုကေယင် ပျောက်လခပါရေ။ သီနိစိဗျာလ်ဆိုကေယင် ဒေယျေ ငရို့ခရိတ်အဆုံးပါ။
posted by မျိုးသာဂီ at Monday, August 10, 20090Comments Links to this post
တခုခုကိုချစ်နိစော်ရေအမြဲတမ်းကောင်းပါရေ။ ယင်းအထဲမှာ တိုင်းပြည်နန့် လူမျိုးကိုချစ်စော်ပိုလို. ကောင်းရေပိုင်ပိုလို.လေ့မြင့်မြတ်ပါရေ။
၁။ တက်ကြွရေနိုင်ငံသားဖြိုက်အောင်နိပါ။ သင်တိုင်းပြည်၏နိုင်ငံရေးဖြိုက်စဉ်တိမှာပါဝင်ပြီးကေ သင့်အချစ်ကို တတက်ကကြွ လုပ်ရှားဖော်ပြပါ။
၂။ သင့်တိုင်းပြည်၏ အတိတ်ဖြိုက်စဉ်သမိုင်းကိုလေ့လာပါ။ အတိတ်ကလူကြီးသူမတိ ဇာပိုင်ကြီးကျယ် ခန်းနားခစော် တိကို လုပ်ခလဲ? သူရို.၏တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်ကိုဇာပိုင်ပြခလဲ? သူရို.ရေကောင်းစီသျှင်လို့ ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ခကေလေ့ မကောင်းခ ရေရလဒ်တိ ကဇာလဲ? သင့်တိုင်းပြည်၏သမိုင်းကိုလေ့လာသင်ခန်းစာယူပါ။ ရွှီထီးဆောင်းခရေအချိန်၊ ချီးထီးဆောင်းခရေ အချိန်နှစ်ခု လုံးကို လေ့လာပါ။
၃။ ပစ္စုပန်အဖြိုက်အပျက်တိကို အာရုံပြူပါ။ ဥပမာဆိုကေ- လက်ဟိကမ္ဘာဇာဖြိုက်ပျက်နိလဲ? သင့်တိုင်ပြည်က ယင်းဖြိုက်စဉ်ထဲ့မှာ ဇာနိရာမှာဟိလဲ?
၄။ သင့်တိုင်းပြည်နန့်ပတ်သတ်တေ မျိုးချစ် ပုံပြင်တိ၊ ဝထုရှည်တိ၊ နန့်ဒဏာရီတိကို ဖတ်ပါ။ ယင်းတိကိုရွှီးခရေ၊ ဖန်တီးခရေ ပုဂ္ဂိုလ်တိကိုသင့်အံသြလာပါလိမ့်မေ။
၅။ လက်ဟိသင့်တိုင်းပြည်မှာ နိုင်ငံရေးထဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နိရေ၊သင့်တိုင်းပြည်နန့်လူမျိုးကို ကိုစားပြုရေ စံပြ ပုဂ္ဂိုလ် တယောက်ယောက်ကို သူရဲကောင်း အဖြိုက်သတ်မှတ်လိုက်ပါ။ သင်မွှီးရပ်မြီလို.ခေါ်ရေ သင့်တိုင်းပြည် အတွက် သင်ဂုဏ်ယူလာပါလိမ့်မေ။
၆။ သင့်အမျိူးသားကိုကိုယ်စားပြုရေ အရောင်တိကိုဝတ်ဆင်ပီးပါ။ သင့်အမျိုးသားသင်္ဂေတ တိကိုဝတ် တတ်တေ အလေ့ အထတိကိုမွှီးပါ။
၇။ သင့်အမျိုးသားအလံကိုလွှင့်ထူပါ။ ယင်းအလံ ပိုစတိကာတိကို သင့်ကား၊စက်ဘီး နန့် သင့်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းမှာ ကတ်တတ်တေ အလေ့အထလုပ်ပါ။ ယင်းလုပ်ရပ်သည်လည်း သင့်တိုင်းပြည်ကိုချစ်ကြောင်းပြရေလုပ်ရပ်ပါ။ သင့်တိုင်းပြည်ကို ကိုယ်စားပြုရေ အလံတော်ကို လေးစားဖို့ကိုမမိန်ပါကဲ့။
၈။ အားလပ်ရက်တိမှာသင့်တိုင်းပြည်၏အတိတ်မှာဖြိုက်ခရေ နိထူးနိမြတ်တိကို ကျင်းပပီးပါ။ သင်ရို.စစ်ပွဲနိုင်ခဖူးလာ? လွှတ်လပ်ရေးရခဖူးလာ? ဆိုစော်တိကို။ အထူးသဖြင့်သွှီးမြီကျခလို့အနိုင်ယူခရေအောင်ပွဲတိကိုကျင်းပပီးပါ။ သာမန်ထမင်းပေါင်းချက်စားတိထက်အလေးအနက်ထားပါ။
posted by မျိုးသာဂီ at Friday, July 24, 20090Comments Links to this post
ပန်းမြတ်သဇင် - ပန်းသဇင်
နှင်းဝီဝီကေ - နတ်တော်လ။
ခမောင်းပင်မှာ - သဇင်ပန်း။
မယ်နှမမှာ - သဇင်ပန်းကို
ပျိုတိုင်းကြိုက်တေ - ပန်းသဇင်
မယ်ကြင်မောင်ဝေ - တက်လို.ဆွတ်ကေ
မယ့်ဂေါင်းထက်မှာ - လှလို.ပင်။
တဝက်ကိုပန် - တတန်နောင်ကျိုး
မြတ်စိန္တေလေ- ညောင်ရည်အိုးမှာ
သဇင်ပန်းကို - အရင်းတည်
အခါတန် - သင်္ကြန်လမှာ
ဆံတော်သျှင်လေ - စေတီရင်းမှာ
ဆုတောင်းလီလေ - ဆုတောင်းလီ။ ။
posted by မျိုးသာဂီ at Saturday, July 18, 20090Comments Links to this post
posted by မျိုးသာဂီ at Monday, June 22, 20090Comments Links to this post
posted by မျိုးသာဂီ at Sunday, February 22, 20090Comments Links to this post
ပညာကျော်ပညာကျော်တိုင်းအသိက၀ိအမော်
တိုင်းသိအကျော် တိုင်းသိအကျော်တိုင်းသိအမော်
အမတ်တော်လည်း (၀ိမလ) ၂ ရဲစွမ်းရေ (ဦးမြ၀ါ) ၂
(စာဆိုမှာ) ၂ မင်းညိုပါလေး --။
(ဦးမြ၀ါ) ၂ အသက်ကိုစွန့်ပျာယ် လားရေလေးလေ
ရက္ခမဏ္ဍလတိုင်းကိုလ အံမတုနိုင်ရန် တခြားနိုင်ငံ
အာဇာနီဇာနီသွီးယေက ပြေငြိမ်းလီပြန် ငြိမ်းလီပြန်
ပူဇော်ဖို့ရေးဈာပနပွဲ ဖောင်တော့်တင်ပျာယ် ဆွဲရေလေးလေ
(ဆွဲရေးလေး) ၂ ဆွဲပါရေလေးလေ --။
ဖီးဘယာဝီးလို့စည်ပင်သာလှရေ --။
ရက္ခမဏ္ဍဓည၀တီငါ့ရို့ဌာနီ ရွှီပြည်ကြီးကို
ထိုစဉ်အခါ ပြိုင်စံယှားရေ ငါရို့အမတ်ပညာကျော်
၀ိမလခေါ် သုခမိန်ကြီးနှင့် ပညာဝံသငလက်ရုံး
ငါရို့ပြည်ငါရို့မျိုး ငါရို့ဘုရင် (ငါရို့ဘုန်းရောင်နီသို့အလား)
ရာဇာကြီးနှင့်မြတ်မင်းဘာ (စောမွန်ဘွဲ့မှာ ယဉ်နုပါ၏)
(ဦးမြ၀ါလေးစားပါယင့်) ၃ --ကွယ်လွန်သူရခိုင်လွတ်လပ်ရေးပါတီ (AIO) အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး စံကျော်ထွန်းရွှီရေစပ်သည်။)
posted by မျိုးသာဂီ at Saturday, February 21, 20090Comments Links to this post
Save Arakan! Save Arakan!
ဂုတလော နိုင်ငံရေးမေဒီယာ လောကမှာ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ မူဂျာဟစ် ကုလားဆိုးတိ ၏သတင်းကို ကျကျာယ်ပပြန်. ပြောနိန်.စွာကိုတွိရပါရေ။ ဒေကုလားဆိုးတိ နောက်ခံသမိုင်းနန်.ရည်ရွယ်ချက် ကိုမသိဘဲ တချိုနိုင်ငံရေးသမားတစုရေ ယင်းမာယာရှင်တိဘက်က ရှီနိန်.ရှီရပ် ရပ်တည်နိန်ကတ်တေ။ သူရို.နိူင်ငံရေးမျက်နာသာ တစိချေရဖို.အတွက် ရခိုင်တမျိုးသားလုံး၏ အနာဂတ်နန်. ဂုန်သိက္ခာကိုမိန်.ထားဂတ်စွာကိုမြင်ရပရေ။ကမ္ဘာမုာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဒဘာသာနိုင်ငံအဖြိုက်ထွန်းကာခရေ ရခိုင် လက် နက်နိုင်ငံတော် ရေဂုခါရိုဟင်ဂျာအမည်ခံမူဂျာဟစ်ကုလားဆိုးတိခြိမ်း ခြောက်စွာ ကိုခံနိန်ရဂတ်တေ။ ဒေကုလားဆိုးကား ဂဂေါင်ပြင်းထန်ရေ သူရို.၏ မူပိုင် “မာယာလက်နက်”နန်.ရိုးသာရေ ရခိုင်တိ၏ အမျိုးဘာသာ၊သာသနာကိုစော်ကားနိန်ကတ်တေ။နံမည်ခံ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံမှာနံမည်ခံနိုင်ငံရေးသမားတိလေ.ဂဂေါင်းတွိရပါရေ။ယင်းရို.လူမျိုးစုတိလွှတ်မြောက်ဖို.အတွက် တဘက်လူမျိုးစု၏အမှန်တရားကိုခေါက်ထားဂတ်တေ။ ယေဇုနန်. မြတ်ဗုဒ္ဒ၏ တရားတော်ကိုမူဂတ်ပါ။ “မိမိကိုယ်ရာကိုးကွယ်ရာဖြိုက်တေ။”၊ရခိုင်လူမျိုးနန်.ရခိုင်နိုင်ငံတော်လွှတ်မြောက်ဖို.အတွက်
posted by မျိုးသာဂီ at Friday, February 20, 20094Comments Links to this post
Location: မြောက်ဦး, Arakan